Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Sergio Busquets Storyhood Plus Sheekooyinka Xogta Loo Yaqaano
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Genius Football kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska; "El Pulpo". Our Sergio Busquets Sheekooyinka Cartheel iyo xaqiiqada Warqada Xogta waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Haa, qof walba waa ogyahay qaabkiisa uu ku ciyaaro FC Barcelona. Si kastaba ha noqotee, kaliya dhowr ah ayaa tixgelineysa Sergio Busquet's Bio oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Sergio Busquets Hooyo Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Hore iyo Qoyska
Sergio Busquets Burgos wuxuu ku dhashay maalintii 16th ee July 1988 hooyadiis, Loli Burgos iyo Aabe, Carles Busquets, oo labaduba sawiray Sergio Busquets Family Photo.
Sergio wuxuu ku dhashay jiilka labaad ee kubadda cagta ee qoyskiisa. Wuxuu ku koray magaalada Sabadell ee Barcelona markii uu kubad la ciyaaray walaalkiis Aitor Busquets (sawirka isaga oo hoos ku qoran) inta lagu jiro caruurnimada.
Aabihiis, Carles, sidoo kale wuxuu ahaa ciyaaryahan, goolhayihii hore ee Barcelona oo joogay kooxda muddo sanado ah inta lagu guda jiro 1900s, inkastoo inta badan loo isticmaalo nuqul. Sergio ayaa lagu wadaa inuu noqdo ciyaaryahan kubada cagta ka mahadceliya aabihiis oo had iyo jeer doonayay wiilkiisa yar inuu raaco raadkiisa. Sawirka hoose, Ducadiisa uu ku noqon karo sidii aabihiis oo kale ma ahayn khibrad malahan.
Xidhiidhku wuxuu ku yaalaa Sergio Busquets Qoyska: Aabihiis, Carles Busquets wuxuu ahaa goolhaye daacad ah oo ku adkeystay in loo isticmaalay doorasho labaad sannadkii uu joogay FC Barcelona. Ka dib markii lagu soo waramayay inuu ka tagay tartankii kooxdii ugu horeysay ee goolhayaha Barca, Charles ayaa xaqiijiyay wiilkiisa, Sergio inuu xirfadiisa ciyaareed ka bilowdo kooxda akadeemiga hoose ee dhallinyarada. Hadafku wuxuu ahaa in la hubiyo in Sergio Sergio uu wajahayo tartan hoose oo kor u kaca.
Sergio Busquets Hooyo Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Soo-koobidda Xirfadaha
Markii uu da'diisu ahayd 7 sanadka 1995, Busquets wuxuu bilaabay safarkiisa kubadda cagta ee kooxda Badia. Ka dib markii uu xilli ciyaareedkii qaatay, wuxuu u wareegay CEF Barberà Andalucía 1996 waxaana joogay seddex sano. Sergio ayaa ku biiray akadeemiyadda UE Lleida ee 1999 sababtoo ah isaga Go'aanka niyadjabka aabaha inuu ka tago FC Barcelona.
Sergio Busquets Oo La Xusuusto: Sergio ayaa yimid Akadeemiyada kubadda cagta ee Lleida sababo xirfad leh oo aabihiis, Carles, kaasoo niyad jabay Louis van Gaal (Tababarihii hore ee Barcelona) oo ka soo baxay dulqaadkii isaga, isaga oo ku qasbay inuu ka tago Barça si uu u saxiixo Lleida.
Waxa ay ku xiran tahay in Jose Mourinho uu sawir hooseeyo sawirka hoose) uu ahaa caawiyaha tababaraha FC Barcelona markii Carles ka tagay.
Carles Busquets ayaa si carro leh u raacay qoyskiisii ​​oo dhan Sergio, kaasoo ka soo tagay kooxdiisii ​​hore ee Barcelona, ​​Unió Esportiva Barberà si uu ugu ciyaaro Lleida halkaas oo uu seddex sanno ku qaatay. Sergio Busquets ayaa kor u kacay dhamaan ciyaartoyda da'da yar, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu fiicnaa dhalinyarada da'da yar ee kooxdiisii ​​hore isagoo hogaaminaya kooxdiisii ​​si uu ugu guuleysto koob weyn.
Ka dib markii uu ka fariistay kubada cagta ee Lleida ee 2002, Sergio Busquets ayaa dareemay raaxo la'aan kooxda ka dhisan inay dareemaan wax kale oo ay u dagaalamaan, markaa baahida loo qabo inay u gudubto heerarka dhalinyarada. Waxa uu ku biiray kooxda Jaakac Terrassa ee 2003 waxaana uu ku qaatay labo sano oo kale akadeemiyadda ka hor inta uusan ku dhicin akadeemiyadda FC Barcelona ee La Masia. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Sergio Busquets Hooyo Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Nolosha Xiriirka
Gadaal kasta oo weyn, waxaa jira haweeney weyn, ama sida hadalku u socdo. Dhamaanba guulaha kubada cagta ee Barcelona oo dhan oo guuleysta, waxaa jira xidig aad u fiican ama saaxiibbo ah sida lagu arko magaca Elena Galera Moron (sawirka jacaylka nolosheeda hoose).
Xilliga qorista, Sergio Busquets waa haatanly waxaa suuragal ah in aan la qabin sababo gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku jiray xiriir dheer oo lala yeeshay saaxiibkiisa Elena Galera Moron oo uu kula kulmay 2013. Xiriirkooda ayaa sii waday in ay aad u koraan tan iyo markii ay la kulmeen. Inkastoo inta badan ciyaartoydiisa FC Barcelona ay isguursadeen, Sergio oo ah maalqabeen ka tirsan 30 (waqtiga qoraaga) ayaa diiday inuu guursado laakiin wuxuu go'aansaday inuu ku biiro.
Maalintii 8th ee Maarso 2016, Sergio iyo Elena waxay soo dhaweeyeen ilmahooda koowaad iyo wiilkii ay u magacaabeen Enzo. Hoos waxaa ku yaryahay Enzo yar oo aad u fajacsan waalidkiis.
Xilligan aadka u gaarka ah ee Sergio Busquets waa xilli ciyaareedkan dabaaldega koobab, markii Elina iyo Enzo labadoodaba ay ku biiraan Sergio iyo kooxda kale ee Barcelona FC si ay caano u helaan.
Fasaxyada ay la leeyihiin eeyaha ka dib marka ay dhacdo xusuusta koobaad ama dhamaadka xilli ciyaareedka waxay ku badan tahay Sergio Busquets iyo qoyskiisa.
Isagoo ka hadlaya eeyaha, waxay ku haboon tahay in ay sheegaan in lamaanuhu leeyahay laba buldogal oo caan ah oo loo yaqaan 'Minnie and Lily' oo sawir hooseeya.
Waxaad si sahlan u ogaaneysaa mid ka mid eey eyda kor ku xusan ay u egtahay mid isku dhow oo leh mid ka mid ah sawirkii hore ee Sergio Busquets. Asal ahaan, eey u egtahay eeyadu waxay caan ku tahay ciyaartoyda FC Barcelona. Hoos waxaa ku qoran Lionel Messi nasashada eeykiis oo helay helitaan korodh ah oo udhaxeeya inta u dhexeysa Febraayo illaa September 2016.
Sidoo kale April 2018, labadaba Sergio iyo Elina ayaa shaaca ka qaaday warbaahinta bulshada in ay filayaan ilmo labaad.
Sergio Busquets Hooyo Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Xaqiiqooyinka Tattoo
Xaqiiqadan gaarka ah waxay muujineysaa wax badan oo ku saabsan taariikhda Sergio Busquets taariikhda qoyska taasoo laga yaabo inay lahaan karto qaar ka mid ah Carabta oo ay uga mahad celinayaan carabtiisa Carabta oo ku yaalla garabkiisa bidix. Sergio Busquets Tattoo carabi ayaa u tarjumaya;
"Waxyaabaha aad adiga, nolosha ee waddankayga",
Wuxuu u sharaxay tattookiisa inuu ubadkiisa hooyada u ahaa oo labaduba aad ugu dhoweyd geeridii.
Sergio Busquets Hooyo Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Xaqiiqooyinka Lanky
Isaga oo si taxadar leh u eegaya sawirka hoose, Sergio's muuqaalkiisa muuqaalka ayaa muujinaya qaar ka mid ah Carabta. Mararka qaar, dadku waxay marwalba dareemeen meesha Sergio Busquets uu tamarkiisa ku helayo inuu tixgeliyo qaabkiisa.
Dhanka kubadda, Sergio Busquets 'lugaha iyo gacmaha marwalba waxaa la siiyaa isticmaalka muhiimka ah. Tani waxay u muuqataa sida uu awood u leeyahay inuu si dhakhso leh u daboolo dhulka si deg deg ah oo si joogta ah uula kulmaya tartamayaasha tartanka kubadda cagta, iyaga oo dhigaya mid joogta ah.
Ciyaartoyda kubada cagtu waqti dheer ayay ku adkeeyeen inay ku adkaato sida ay u xaddidan tahay sida weyn ee Sergio gacanta ugu jirtey iyo isbedelka wareegga.
Sergio Busquets Hooyo Sheeko dheeraad ah Xogta Warka Xadida -Daboolo Trust
Sergio Busquets waa wax aad u qurux badan garoonka dhexdiisa. Wuxuu keenaa xasilooni iyo difaac weyn oo kubada cagta ah.
Waxay ahayd sababtoo ah awooda uu ku bixin karo daboolka weyn ee garoonka Carles Puyol wuxuu u soo bandhigay maaliyada kubada cagta xilligii uu ka fariistay.
Shaki la'aan, qalad ka yimid Sergio Busquets ayaa ka tagaya daafaca kooxdiisa ee shambles. Awoodda Sergio uu u leeyahay inuu wax akhriyo wuxuu u fududeynayaa isaga inuu sameeyo dhexda qaaliga ah. Had iyo jeer way adag tahay in la helo a sida oo kale bedelka ciyaaryahanka reer Spain.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay inaad akhrisato Sergio Busquets Hore ee Carthouse iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Gerard Pique Sheeko dhalinyaro sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'
Cesar Azpilicueta Storyhood Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha